Maxkamadda caalamiga ah ee xallinta khilaafaadka magaalada London ayaa go’aan ka gaartay dacwadda u dhaxeeysay dowladda Jabuuti iyo shirkadda laga leeyahay dalka Isu tagga Imaaraadka Carabta.
Xukunka ay ridday maxkamadda xalinta khilaafaadka caalamiga ah ee fadhigeedu uu yahay London ayaa ku caddeeysay in dowladda Djibouti ay bixiso adduun lacageed oo gaaraya $385 Million iyo jabinta dul-saarka damiinta kunteenarrada ee dekadda Doraalle.
Dekaddani Doraalle ayay shirkadda DP World ku lahayd saami lagu qaddaray 33.34% halka dowladda Jabuuti saamigeedu gaarayay 66.67%.
Dhanka kale, maxkamadda ayaa amar dul dhigtay dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle kaasoo ah in ay bixiso lacag dhan $148 Malyan oo maxkamaddu ay ku sheegtay lacag ka soo xarootay kunteenarro gaadiid ah oo loo wareejin dekadda Doraalle, waqtigii ay gacanta ku heysay shirkaddani DP World.
Waxaa sidoo kale maxkamaddu ay xukuumadda Jabuuti ku xukuntay bixinta kharashka sharci ee ka dekadda Doraalle, qeybteeda Konteenarrada.
Dowladda Jabuuti ayaa sanadkii tegay shirkadda DP World ka eriday dalkeeda, kaddib markii shirkaddaasi ay ku eedeysay khiyaano iyadoo dowladdu ay sheegtay in aynaan suurtagal ahayn dakhliga DP World ay u baahan tahay iyo waxa soo xarooda.